सी चिनफिङको सफलताको सुत्रः आफ्नो हैन, सधैं अरुको भलाइ ! बुबाले यसरी सिकाएका थिए - Deshko News Deshko News सी चिनफिङको सफलताको सुत्रः आफ्नो हैन, सधैं अरुको भलाइ ! बुबाले यसरी सिकाएका थिए - Deshko News
सी चिनफिङको सफलताको सुत्रः आफ्नो हैन, सधैं अरुको भलाइ ! बुबाले यसरी सिकाएका थिए
तत्पश्चात, मैले आफ्ना जीवनमा ती तीन सिद्धान्तहरुलाई अपनाएकाे छु । मैले गर्ने हरेक कामहरु, चाहे त्यो व्यक्तिगत होस् वा व्यवसायिक, मैले सधैं आफूभन्दा पहिले अरुको बारेमा सोच्ने र उनीहरुलाई नै अगाडि राख्ने गरेको छु । सामाजिक सन्जालबाट
एजेन्सी, चैत्र २८चीनबाट सुरू भइ विश्व महामारी कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणका कारण विश्वभर ज्यान गुमाउनेको
एजेन्सी, चैत्र २८अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले बिहिबारको प्रेस ब्रिफिङमा औषधी उत्पादक कम्पनी फाइजरले कोरोनाभाइसलाई पुनरावृत्ति